Shot pasi Gweta Philippe Schol uye kubira kwenhema Schiphol: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa6 November 2019	• 6 Comments
Izvo zvichave kure-zvinotorwa kune vazhinji uye zvinonzwika senge sheer zvisina musoro pandinotaura kuti zita Philipi Schol rine subliminal link neSchiphol. Tarisa uone zita raPhilippe Schol. Subliminal pane iro izwi Schiphol. Neuro Linguistic Programming kana subliminal kuronga saka chimwe chinhu chinoitika chisingazive muuropi hwako. Aya ndiwo mafomu e "hypnosis nzira" dzave dzichishandiswa munhau mumakore. Hongu zvinotyisa kuti rimwe gweta rakapfurwa, asi kuuraya kwaDerk Wiersum kwakafanana nePsyOp (kushanda kwepfungwa) uyezve pano hatizive kana zvingadaro zvekare. Chirevo chekuti Philippe Schol abuda munjodzi muchipatara hachivhiringidzi mukana wePsyOOp. Muzviitiko zvese zvinokwanisika kushanda nevanhu vakakanganisika mune PsyOp uye / kana kushanda nemajecha akadzika. Iyo Schiphol hanzi yekuzivisa ikozvino yaonekwa kuve alarm yekunyepa.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti PsyOps inogona kuiswa pamwechete kuburikidza nemakadzika uye / kana kukanganisa vanhu, asi pamusoro pezvose zvazvino mazuva ano kunyange mwedzi wakamirira kusundira kuburikidza nematanho matsva kana mutemo. Kugadzira dambudziko rekukanganisa kukuru munharaunda, nechinangwa che mamwe mapurisa (imwe mari kune mapurisa, kururamisira uye / kana uto uye mamwe mapurisa emunyika mutemo), ndiwo maitiro ayo mutambo wePfungwa Psychology unoshanda. Ungaita sei technical kudaro PsyOp, iyo movie Wag iyo Imbwa kubva ku1997 yakatotsanangurwa mune yakanyorovera shanduro, asi isu hatigoni kubvisa kuti ndiyo tsika yemazuva ese enhau uye nzira dzanhasi dzakawedzera zvakanyanya kupfuura shure . Ini ndakatsanangura izvi mune dzinoverengeka zvinyorwa:
Zvinokurudzirwa kuti uverenge izvo zvinyorwa zvizere. Zvakare mune zvangu bhuku idzva Ini ndinokurukura nyaya iyi zvakare uye ini ndinokurukura mufananidzo akazara wekuti misa inoridzwa sei Panyaya yekuponda (pamwe PsyOp) kuuraya kwaDerk Wiersum, hazvina kutora nguva refu kuti Gurukota Ferdinant Grapperhaus abate yakasimba muhari yemutero kuti achengete mari yakawanda yehurumende yemapurisa. Ihwo hushoma huwandu hwe 110 mamiriyoni zvisingasviki! Ehe, iwe unofunga kuti zvakanaka, nekuti chinodiwa nemhosva yese iyi:
Mushure mezvose, isu taive ne (PsyOp?) Kurwisa pazviri Panorama chivakwa, iyo (PsyOp?) kurwiswa pa Telegraaf chivakwa uye isu takave nekuderedzwa mazviri (PsyOp?) Matanho aMarengo achifungidzirwa nematsotsi (akazvisarudzira?) Mocro Mafia musoro wepasi (deepfake?) Ridouan Taghi. Hatizive. Ivo vese midhiya nyaya. Inounzwa kwatiri nevezvenhau uye saka tinozvitenda. Uye kana mamwe midhiya akanyarara, inofanira kuve yechokwadi. "Hongu, unayo iye Martin Vrijland uyo asingatendi zvachose mune izvo zvatinoona munhau, asi hey izvo hazvisi mumutsara!"Kana kuti zvimwe zvinopindirana neizvi uye tiri kunyatsoridzwa paJohn de Mol studio gadziriro yekugadzira? Ehe, John de Mol ndiye muridzi weAlgemeen Nederlands Persbureau vakadzi uye vanyoro.
Muchirevo chedzidziso dzekupedzisira dzevezvenhau, zvakawedzerawo kubatsira kuratidza nzira dzambotaurwa dzeNLP. Ndiyo chaiyo iyi nzira isina kujeka, isingabvumiki yekugadzira iyo inoshanda zvakanyanya zvine simba pane kududzwa kuchirongwa kuburikidza nemafungiro ekuona, ayo anoshandiswa kuvanhu mazuva ese. Kuronga kwakadaro kwakapusa kunoitika kuburikidza nematanho anozivikanwa chete kuboka rakasarudzwa revanhu vakadzidza psychology, psychiatry kana kushambadzira. Isu tinowanzo taura nezve musoro wenyaya, mapikicha kana mifananidzo inofambisa kana kuvakwa kwenyaya inoitika neiyo subliminal programming inoitika. Matenderedzwa anotenderera uye anodzokera uye anoenderera mberi munhau munhau dzeNOS mienzaniso yemhando dzisiri pachena dzedzidziso dzehunyanzvi. Kunyangwe isu tichigona kufunga kuti vanofungidzira chete saVictor Mids vanoshandisa rudzi urwu rwechinhu, isu hatiteerere kune maitiro ezuva nezuva enzira dzakadaro munhau. Uye kunyangwe kana tatoverenga kuti nzira dzakadai dziri kushandiswa, isu tinongoramba tichiverenga bepanhau kana kuona nhau, nekuti isu tinotenda kuti tinogona kuwana kuburikidza nazvo kana isu tinongoda 'kuramba tichiziva zviri kuitika'.
Vhidhiyo iri pazasi inoratidza kuti subliminal maitiro ane simba rakakura sei pane yako subconscious kupfuura iwe yaunofunga kuti inogoneka. Chirevo chekuviga paSchiphol chingaite senge alarm yekunyepa, asi pamwe ine zvese zvekuita nechimiro chechinyorwa chehurongwa hwekusimisa kune imwe nyaya yenhau yanhasi muuropi hwako: Philippe Schol. Iwe unofanirwa kugara uchiunzwa uye kuchengetwa nenzira yekugamuchirwa, kuitira kuti iwe ugamuchire iyo yose mitsva mitemo: yakawanda mari kuhurumende yemapurisa uye yakawanda mapurisa emutemo mutemo.
Ive wakamuka nezve mukana wekuti iwe uchave uchitambaidzwa pamwero mukuru mune yekudyidzana pakati pehurumende nevezvenhau uye mamwe midhiya!
Muvhidhiyo, sarudza 'zvinyorwa zvepamberi' uye sarudza 'otomatiki' uye wozoti 'Danish' yezvinyorwa zveDutch
Source chinyorwa listings: wikipedia.org, destentor.nl, rtlnieuws.nl
Idzva Martin Vrijland bhuku 'Icho chokwadi sezvatinozviona' chakagadzirira kutumirwa!
Tags: advocaat, dzikadzika, deepfakes, Derk, Derk Wiersum, Featured, pfuti, kubira, chirevo chegoho, vezvenhau, ziviso, pasi, operation, Philippe Schol, mupfungwa, psyop, Schiphol, Wiresum
7 November 2019 pa 00: 25
Zvakare zviri hilarious kudaidza idd, alarm yekubira uye mutori weparool anodanidzira pasi kuenda kuimba yekubvakacha |:
"Mungandiudzewo chii chakaipa, ma'am?" Ona chinongedzo chakatemwa, hongu hongu hongu Parool, Telegraaf, NRC haina basa zvekare
CUT & Paste uye zuva rinotevera Pauwtje ane imwe nyaya (iyo yave iri pasherufu kwenguva yakareba).
Chii chinosimudzira vanhu avo vanozvikweretesa kune zviitiko zvakadaro-zvakarongedzwa zviitiko, kuti vaite avo vasina kuvimbika kugona kugona kwakanaka kweusiku iwe unoda uto re psychlogen, zvinowedzera kujeka.
7 November 2019 pa 00: 36
7 November 2019 pa 01: 20
Zvinobuda muMSM sechiitiko zvinogona kungova chiitiko chevaridzi vepamusoro. Wona kana masisitimu ese anoshanda uye edza kuti gullible gwai inoita sei ... shure kwezvose, kuyera ndiko kuziva
7 November 2019 pa 10: 33
Chokwadi, kunyange vaine masimba nemari, vanogara vachitya uye vasingachengeteki kuvanhuwo zvavo. Haumboziva. Ivo stumperds vane simba nemari vasina chaiyo chaiyo chaiyo kuzivikanwa uye kuvimbika. Izvo hazvisi zvekutengesa.
7 November 2019 pa 10: 38
Usakanganwa kuti kune kutya uye kusagadzikana nekuti havagone uye havadi kuzivikanwa nehuwandu hwevanhu nekuti ivo vatorwa, mutsigiri wakatorwa unobata zvinyorwa. Kutya kurasikirwa iwo keypositions zvisingatarisirwi pamwe nehukama hwakabatana, mari nezvimwe.
8 November 2019 pa 19: 25
Ehe, izvo, izvo, vakadzi uye vanyoro vezvinyorwa vanozvipira kunamatira kune zvidiki kana zvishoma pane izvo matanho avakaronga. Ruzha rwese rwunotsauka runotariswa kwazvo nevano fungidzirwa. Izvo hazvina kumbobvira zvamboita zvakasiyana muMadurodam, apo magadheni nemaheedhi akachengetwa, makombi anoremerwa .. zvese zvinotaridzika sezvazviri, zvakasimwa uye zvisina tsvina .. iwe ungada kuda kugara imomo 😀
« Adobe, Twitter uye main media media vari kuenda kunorwa zvakadzika?
Chii chiri dambudziko re nitrogen, nei varimi vachinyunyuta uye nei kudzora kuchikurumidza? »
Total Visits: 14.058.822